Manan-tsaina Logistics System
Nanaovany & Solutions
Vahaolana ho an'ny rehetra ilainy
Fampiharana lehibe isan-karazany
Fahamarinan-toerana, marina sy ny asa fanompoana ela velona
Ara-potoana sy mahomby rehefa avy-fanompoana varotra
Liush, naorina tamin'ny 1995, dia nitarika Robot Sinoa automatique Integration Provider izay manana telo ny varotra sy ny R & D foibe sy ny orinasa mpamokatra entana, orinasa roa any Shenzhen, Suzhou sy Anqing. Manana mihoatra ny 700 ny olona, ​​izay ny isan'ny R & D tehina efa ho tonga ny 100 izahay manana zavamaniry izay manarona 50000 metatra toradroa ary fitaovana isan-karazany amin'ny fikarakarana matihanina fitaovana. Liush Group dia nanao raharaham-Automatic Coating Production-dalana, nandritra ny 25 taona, ary voangony manan-karena traikefa eo amin'ny fampandrosoana ny milina fandaharana, automatique teknolojia planina sy ny milina fampidirana planina. Ny raharaham-barotra lehibe indrindra ahitana ny famokarana coating tsipika, orinasa milina fampidirana, Auto-stereoscopic trano fanatobiana entana sy ny sisa. Izahay dia za-draharaha amin'ny ekipa efa mandroso ny teknolojia, ka dia isika afaka manome mpanjifa amin'ny tolotra isan-karazany feno.
Coating Production Line (vovoka, Paint na ankosotra)
Ny famokarana afaka tsipika isan-karazany ny vokatra mifono workpieces na amin'ny fiarovana samy hafa coating na maro loko amin'ny alalan'ny dingana isan-karazany.
Ny rafitra dia afaka manampy sy mitahiry karazana mahomby ampy hihaona mpanjifa 'haingana sy matetika fanaterana zavatra ilaina.
Namboarina pamokarana afaka manampy fanatsarana ny vokatra tsara sy ny vokatra faran'izay betsaka.
Nanao mba hahazoana izay ilainao
Get A Quote Ankehitriny
Fa Technology na Ankehitriny-varotra
Painting , automatique , Fanuc Robot , Integration , Automatic System , Logistics ,